ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ကုန်များ)
ဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးဘို့နံရံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကို ဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက် 1. နံရံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကို ဖေါ်ပြချက် ဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးအတှကျနံရံရပ်ကွက်အိပ်ရာခေါင်းကို panel ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို...
hot ရောင်းရန်ဆေးရုံ Headboard Panel ကို 1.Hot ရောင်းရန်ဆေးရုံ Headboard Panel ကို ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါ Hot ရောင်းရန်ဆေးရုံ Headboard Panel ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး built-in...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံကုတင်ဌာနမှူးယူနစ် 1. ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် ဖေါ်ပြချက် ဦးခေါင်းယူနစ်အိပ်ရာအဆိုပါဆေးရုံရဲ့မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး built-in cabling...
PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုကုန်ကျစရိတ် site ကို-on ဖျေါပွခကျြအဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို: အီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုတတ်နိုင်သမျှ 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဦးခေါင်း Panel ကိုအိပ်ရာနံရံ 1. Compact နံရံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကို ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါပန်းချီကားများဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
O2 အဘို့ဝှကျထားနံရံအိပ်ရာခေါင်းကို panel က O2 များအတွက် 1Concealed နံရံအိပ်ရာခေါင်းကို panel က ဖေါ်ပြချက် Terminal နှင့်အတူရပ်ကွက်နံရံအိပ်ရာဌာနမှူးဘုတ်အဖွဲ့စနစ်ရဲ့မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
ရပ်ကွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးများအတွက်ဌာနမှူး Panel ကိုအိပ်ရာ ဆေးရုံများအတွက် 1. ရပ်ကွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကို ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာခေါင်းကို panel က 1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာခေါင်းကို panel က ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ်
ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုကုန်ကျစရိတ်
အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုစနစ်
ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် နံရံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုကုန်ကျစရိတ် နံရံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုကုန်ကျစရိတ် အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် အိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကိုစနစ်